စာသင်သားများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ – Internet Journal |
Oct 12, 2017Comments Off on စာသင်သားများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ0433
တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း (Presentation) အပိုင်း – ၂
လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေးရာတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကို စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြောဆိုတင်ပြချက်များတွင် အသုံးပြုသော စကားအသုံးအနှုန်းများ အဆင်ပြေခြင်းကလည်း အောင်မြင်သော တင်ပြဆွေးနွေးမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်လိုက်တွင် စကားရပ်နမူနာပုံစံများကို လေ့လာသိရှိ ထားသင့်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အရောင်းတာဝန်ခံတစ်ဦး၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စကို တင်ပြဆွေးနွေးချက်ကို လေ့လာကြည့်နိုင်
“As you all know, this company is losing its market share. But we are being asked to increase sales by 20-25% How can we possibly increase sales inashinking market?”
“အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ဈေးကွက်ရှယ်ယာတွေ လျော့နည်းလာနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရောင်းအားကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြှင့်တင်ဖို့ အစီအစဉ်ကလည်း ရှိနေပြန်တယ်။ ဒီလိုဈေးကွက် ကျပ်တည်းတဲ့ကြားက အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ နည်းလမ်းကို ဘယ်လိုရှာနိုင်ကြမလဲ။”
“Today I am going to talk to you about how we can do this. My presentation will be in three parts. Firstly I am going to look at the market and the background. Then I am going to talk to you about our new products and how they fit in. Finally, I am going to examine sense selling strategies that will help us increase our sales by 20%. The presentation will probably take around twenty minutes. Then will be time for questions at the end of my talk.”
ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေး လိုပါတယ်။ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်။ ပထမဆုံး ထုတ်ကုန်အဆင့် အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအပိုင်းကတော့ ဘယ်လိုရောင်းချမလဲ ဆိုတာဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ရောင်းအား ၂၀ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် အရောင်းနည်းဗျူဟာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြဆွေးနွေးမှုက မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာနိုင်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးချက် ပြီးဆုံးတဲ့အခါ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးမြန်းချက်တွေအတွက် အချိန်ပေးပါမယ်။”
တင်ပြဆွေးနွေးမှုကို ခြုံငုံပြောဆိုချက်အပြီးတွင် မူလအရင်းခံအ ကြောင်းအရာ၏ တင်ပြချက်များကို တင်ပြပြောကြားရသည်။ တင်ပြ
ပြောဆိုနေစဉ်ကာလ နားထောင်လေ့လာသူများကို အရေးတယူရှိကာ အာရုံစိုက်မှုရှိစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အနေဖြင့် မူလအရင်းခံအကြောင်းကိစ္စကို အခါအားလျော်စွာ ထပ်ပြောကြားပေးနေသင့်သည်။
“As I said at the beginning …”
” အစက ပြောကြားထားခဲ့တဲ့အတိုင်း ….”
“As you remember, we are cancerned with …”
” သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း …. နဲ့ပတ်သက်လို့ ….”
“That’s all I have to say about ….”
“ကျွန်တော်ပြောဆိုတင်ပြလိုတာတွေ အကုန်ပါပဲ ….”
မိမိဆွေးနွေးတင်ပြချက် (Presentation) များမှာ ပါဝင်ထားသည်။ အထင်အရှားသိသာစေတဲ့တင်ပြမှုများကို ဂရုပြုစေလိုသည့်အခါ –
“This graph show you …”
“ဒီပုံစံဇယားတွေက …. ပြဆိုတာဖြစ်တယ်”
” Takealook at this …”
“ဒီမှာ တစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ….”
“This chart illustrates the figures …”
“ဒီဇယားပုံစံက ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပြဆိုပေးနေတယ် …”
“From this, we can understand how/why …”
“ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ် …”
နောက်ဆုံးပြကွက်ဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေးပြီးသောအခါ အကျဉ်းချုံးကာ ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပေးရပါသေးသည်။ အဓိကအားဖြင့် မိမိတင်ပြ ဆွေးနွေးချက်များ၏ အဓိကရည်ညွှန်းချက်ကို နားထောင်လေ့လာသူများကို ပိုမိုသိသာထင်ဟပ်စေရန် ဖြစ်သည်။
“That brings me to the end of my presentation, I have talked about …”
“ကျွန်တော်ရဲ့ တင်ပြမှုအဆုံးသတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ …”
“Well, that’s about it for now. We’ve covered ….”
“ကောင်းပါပြီ။ ဒီမှာ တင်ပြချက်ကိုအဆုံးသတ်လိုပါတယ်။ တင်ပြလိုတဲ့အချက်ကို နားလည်စေတဲ့ ….”
“So, that was our marketing strategy. In n brief, we ….”
“ဒီတော့၊ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာပါပဲ။ အတိုချုပ်အနေနဲ့ …”
တစ်ခါတစ်ရံ ပထမဆုံးရည်ရွယ်တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်နှင့် နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ် တင်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ပြောဆိုတင်ပြကြရသည်။ သို့မှသာ မိမိ၏တင်ပြဆွေးနွေးမှုကို ပိုမို၍သဘောပေါက်နားလည်စေနိုင်သည်။
“So I hope that you’realittle cleared on how we can achieve sales growth of 20% …”
“ဒီတော့ကာ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအား ၂၀ % တိုးလာရေးကို ဘယ်လိုလုပ်ကိုင် သင့်တယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းတော့ပိုပြီး နားလည်သွားကြပြီလို့ ယူဆပါတယ်”
“I hope that my presentation today will help you with what I said at the beginning….”
“အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ပြောဆိုတင်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်ရဲ့ တင်ပြမှုတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။”
တင်ပြဆွေးနွေးချက်များ၏အဆုံးသတ်တွင် တက်ရောက်နားထောင်သူများအား လိုအပ်သိရှိလိုသည့် အချက်များ မေးမြန်းခွင့်ပေးကြရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မရှင်းလင်းသည့် အချက်ရှိပါက ထပ်မံရှင်းပြခွင့်ရကြစေသကဲ့သို့ အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခွင့်ကိုလည်း ရရှိသွားစေပါသည်။
“Think you to listening and now if there are any question, I would be pleased to answer them.”
“အခုလိုတင်ပြချက်များကို နားထောင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မေးမြန်းလိုပါက လှိုက်လှဲစွာကြိုဆို ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်”
မေးမြန်းဆွေးနွေးသူကို ကျေနပ်စွာပြန်လည် တုံ့ပြန်ပြောဆို ရှင်းပြရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ပြီးပြည့်စုံသော တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
“ခင်ဗျားသိလိုတာကို ပြည့်စုံစေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”
“That’s an interesting question. I don’t actually km off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer.”
“အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဒီမေးခွန်းအတွက် လောလောဆယ် ကျွန်တော့်မှာအဖြေတော့ မရှိသေးပေမယ့် ပြန်ဖြေနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။”
တင်ပြဆွေးနွေးမှုကို ပြည့်စုံအောင်မြင်သည်အထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် ယေဘုယျ သဘောပြောဆိုလေ့ရှိသည့် စကားရပ်နှင့် စကားအသုံးအနှုန်းများကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါက ရှောင်ရှားသတိထားရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း အနည်းငယ်သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
စင်မြင့်ပေါ်တွင် ရှင်းပြစဉ်ကာလတွင် မိမိလှုပ်ရှားမှုများက နားထောင်ကြည့်ရှုသူများအတွက် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် သတိထားရပါမည်။ ပြကွက်များမှာ ကြည့်ရှုသူများ သိသာမြင်သာမှုကို အလေးထားရမည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကြောင့် ဝေဝါးမသွားစေသင့်ပေ။ မဆုံးနိုင်သော စာရင်းဇယားများစွာဖြင့် တင်ပြမှုကို ရှောင်ရှားရပေမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြကွက်များသည် မိမိတင်ပြမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရုံမျှသာ ဖြစ်သင့်သည်။
(ရှေ့အပတ်တွင် Business Correspondence အကြောင်းဖော်ပြပါမည်။)
Previous PostFullView က သာမန်မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ
Next PostXenoma e-Skin စမတ်အင်္ကျီ
အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၄၆.၈၂ သန်းရှိ
Online Booking စနစ်ဖြင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အမှန်တကယ် လာရောက်ဆောင်ရွက်
၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက် ကျပ် ၂၁၇၅ ဘီလီယံ သုံးစွဲမည်